Car Power Inverter, Sine Wave Inverter, Battery Charger - Ligao
DC-DC Solar Chaja
Inverter Ine Bhatiri Chaja
DC DC Shanduri
ZVATINODZIDZA, tinoshanda, WE ZVINOITA!
ZVAKAVIMBIKA nokutengesa CAR ACCESSORIES rose
Chivabvu 1 Zuva revashandi repasi rese.
Vadiwa Vatengi, Ndinovimba muri kuva nerakanaka zuva rekutanga Chivabvu zuva repasi rose revashandi. Uye ndinovimba zvese zvinofamba zvakanaka padivi pako. kana iwe uchitsvaga zvigadzirwa zvemagetsi senge voltage regulator / stabilizer, simba inve ...
Online Canton Fair iri kuuya zvakare! Welco ...
Online Canton Fair iri kuuya zvakare! Kuti tikurege iwe-vatengi vedu vanokosha vaone zvigadzirwa zvakajeka, isu tinogadzira 3D yekuratidzira yemuenzaniso yedu kamuri kuratidza zvigadzirwa zvedu. Pls nemutsa tinya pazasi pekubatanidza kana skrini iyo QR co ...
Bhizinesi ziviso kubva kuLIGAO ltd.
Dzokera Kubasa, Tangazve Kugadzira
Vadiwa Vavakoshi Kukosha, Isu, LIGAO tinotarisira nemwoyo wose imi mose mune bhizinesi riri nani muna 2021. Mitsara yekugadzira yemusangano wedu yatangazve izvozvi. Isu ticharamba tichiwedzera tsika uye nekuvandudza mhando! Kana iwe uine chero ...
Merry Xmas kwauri! - LIGAO / PACO
Nhare: + 86-0760-2278 5888
Kubata ne Skype